समृद्धिको छलाङ मार्दै सिचुवान
सिचुवानलाई ‘चुवान’ वा छोटो रूपमा ‘शु’ पनि भन्छन् चिनियाँहरूले । यो प्रान्त चीनको पश्चिमी–दक्षिणी भूगोलमा पर्छ । यो प्रान्तको पहिचान खासमा नदीहरू हुन् । चार वटा नदीको सङ्गम– जियलिङ, जिन्सा, मिन र चो नदीको नामबाट यो प्रान्तको नाम जुरेको चिनियाँ किंवदन्ती छ । सिचुवान प्राकृतिक स्रोतसाधन, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्रको हिसाबले धनी प्रान्त हो । यो प्रान्त ‘स्पाइसी (अमिलो–पीरो) खाना’ का लागि पनि प्रख्यात छ । त्यही प्रान्तमा उत्पादित मसला, अन्न, जडीबुटी र तरकारीले यो प्रान्त भरिभराउ छ । तिब्बतसँग जोडिएको प्रान्त भएकाले यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा तिब्बतीको बसोबास छ । यहाँ चाङ, यी, शु, बा र हान समुदायको बाहुल्यता छ । सिचुवानको जनसङ्ख्या अहिले नौ करोड २० लाख पुगेको छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्कअनुसार यहाँको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव एक प्रतिशत छ । यो प्रान्त ‘शु’ र ‘बा’ नागरिकको जन्मस्थानको रूपमा परिचित छ । आदिवासी जनजातिको कला संस्कृति र पर्यटकीय हिसाबले निकै प्रख्यात सिचुवानको राजधानी छेङ्दु हो ।
सिचुवानमा अथाह प्राकृतिक स्रोत छ । ‘हजार नदीको प्रान्त’ को नामले पनि यो प्रान्त चिनिन्छ । यसले जलविद्युत्मा ठूलो फड्को मारेको छ । पर्यटकीय हिसाबले ठूलो प्रगति गरेको चीनको प्रान्त पनि यही हो । यहाँको आदिवासी जनजातिको संस्कार र संस्कारजन्य कार्यक्रमले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । सिचुवानमा विश्वका पाँच ठूला प्राकृतिक सम्पदा– जिउहाइ उपत्यका, हुङ्लोङ, जाइन्ट पाण्डा, क्यीन्चेङ माउन्टेन र लेसान जाइन्ट बुद्ध रहेका छन् । यहाँ एक हजार एक सय तीन वटा राष्ट्रियस्तरका पर्यटकीय क्षेत्र, १५ वटा राष्ट्रियस्तरका सेनिक पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र, २१ वटा उत्कृष्ट पर्यटकीय शहर र आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर छन् । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि मुख्य आकर्षणका केन्द्र तिनै हुन् ।
सन् १९९० पछि युद्धस्तरमा भएको विकासले छेङ्दु अहिले विश्वकै विकसित शहरमा दरिएको छ । छेङ्दु विमानस्थल चीनको राजधानी बेइजिङ र संघाईपछिको तेस्रो ठूलो विमानस्थल हो । अर्को टिन्फू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सन् २०२० सम्म उडान भर्ने गरी काम सक्ने तयारी गरिएको छ । यहाँ थप १२ वटा क्षेत्रीय विमानस्थल पनि छन् । त्यस्तै चार हजार सात सय किलोमिटर रेलसेवा छ । ठुल्ठूला गगनचुम्बी भवन, चौडा र फराकिला सडक संरचना, ठाउँ–ठाउँमा निर्मित बेली ब्रिज, पार्क र म्युजियम यहाँका लोभलाग्दा भौतिक संरचना हुन् ।
सिचुवान शैक्षिक हिसाबले फड्को मारेको छ । यहाँ १०९ विश्वविद्यालय र क्याम्पस छन् । १३ वटा राष्ट्रिय प्रयोगशाला, ५८ बौद्धिक संस्था र सन् २०१६ सम्म तीन लाख ३० हजार व्यावसायिक जनशक्ति तयार भएका थिए । उच्च प्रविधिजन्य शैक्षिक कार्यक्रम अध्यापन गराइन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यो प्रान्तले प्रसंशनीय उपलब्धि गरेको छ । छेङ्दुका नागरिक घरायसी किनमेललगायत अधिकांश काम मोबाइलबाटै गर्छन् । विद्युत्को बिल तिर्ने, टेलिफोनको बिल, घरको ग्यास अडरदेखि, पानी, किचनमा चाहिने आवश्यक सामान मोबाइलमार्फत माग गर्ने र व्यापारीले घरमै पु¥याउने व्यवस्था छ । चीनमा चलेको सबैभन्दा राम्रो सामाजिक सञ्जाल ‘वी च्याट’ हो । सोही सञ्जालबाट घरायसी किनमेलको माग गर्ने गर्छन् ।
यो प्रान्तले पछिल्लो केही वर्षयता युद्धस्तरमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ । पश्चिमी चीनका १२ प्रान्तमध्ये आर्थिक प्रगतिमा सिचुवान पहिलो नम्बरमा पर्छ । आर्थिक विकासका लागि उच्चस्तरको प्रविधिको विकास चीनले गरेको छ । सिचुवानमा आर्थिक विकासका सबै किसिमको प्रविधि र उद्योगमा तीव्र गतिको प्रगति छ । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा यहाँ ठुल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हुने गरेका छन् ।
सिचुवानमा मिनरल वाटर, कोइला, फलाम, स्टिल, विद्युत्का ठूला उद्योग छन् । यहाँका नागरिकको ४४ हजार ६५१ आर.एम.बी. (चिनियाँ मुद्रा) प्रतिव्यक्ति आम्दानी छ । भौतिक संरचनाको विकास सँगसँगै पुराताŒिवक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण पनि उत्तिकै गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको पुरानो संस्कार र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरी आगन्तुक पाहुनालाई मनोरञ्जन गराउने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत त्यसले भूमिका खेलेको छ । विकासको नाममा पुराना ऐतिहासिक महŒवका वस्तुको विनाश नगरी भौतिक संरचनाको निर्माण गरेको देख्दा यहाँका नागरिक आफ्नो पहिचानप्रति सचेत रहँदै नयाँ संरचनाको विकास गर्न रुचाउँछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
सिचुवानको राजधानी छेङ्दुमा हाइटेक आकाशे रेलसेवा परीक्षणका लागि चलाइएको छ । चीनका लागि यो रेलसेवा पहिलो हो । ब्याट्रीले चल्ने यो रेलसेवा वातावरणमैत्री र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि भरपर्दो मानिएको छ । पिल्लर उठाएर त्यसमा फालामे रडमा झुण्डिएको आकाशे रेल चढ्न त्यत्तिकै आरामदायी छ । माथि सडक, त्यसकै तल रेल चलाउने चिनियाँ प्रविधि अचम्मलाग्दो छ । सन् २०१२ बाट परीक्षणका लागि सञ्चालित आकाशे रेलसेवाको विस्तारको काम धमाधम भइरहेको छ । अहिलेसम्म २१ हजार किलोमिटर दूरीको बाटो परीक्षणका लागि सम्पन्न गरिएको अकाशे रेल सेवा कम्पनीले बताएको छ । यसको भरपर्दो परीक्षणपछि अन्य शहरमा पनि विस्तार गर्ने चीन सरकारको तयारी छ । यद्यपि, सो रेल कम्पनी अहिले सरकारको अनुमतिमा निजी कम्पनीले बनाइरहेको छ ।
सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम
सिचुवान प्रान्तअन्तर्गतको होङ्यान काउन्टीमा निर्मित सामाजिक सेवाका लागि वेलफेयर सिर्भिस सेन्टर नामक वृद्धाश्रम सुविधा सम्पन्न छ । सन् २००९ बाट सञ्चालनमा ल्याइएको सो वृद्धाश्रममा ८० वटा ओछ्यान राखिएका छन् । घरपरिवारका सदस्य गुमाएका, सहाराविहीनका लागि सो वृद्धाश्रम वास्तविक सहारा बनेको छ । सो वृद्धाश्रममा बस्ने वृद्धवृद्धालाई चिनियाँ सरकारले मासिक ५५० आर.एम.बी. र समुदायको तर्फबाट ५० युआन रुपियाँ प्रदान गर्ने गरिएको छ । सो वृद्धाश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवन त्याग गरेमा काजक्रियादेखि अन्तिम संष्कार समेत सोही वृद्धाश्रमले गर्छ । ६० वर्ष उमेर नाघेका तर परिवारका आफ्ना सदस्य नभएका पाका उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रममा राख्ने नीति चिनियाँ सरकारले लिएको छ ।
चीन सरकारको सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक आयोजनाको रूपमा अहिले एक पाटो (क्षेत्र) एक बाटो रहेको छ, जसलाई रेशमी मार्गको नामले पनि जानिन्छ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एक पाटो एक बाटो (वान बेल्ट वान रोड– ओबीओआर) प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । अहिले त्यही आयोजना चीनको लागि स्वप्न आयोजना बनेको छ ।
चीनले अहिले जति आर्थिक विकास गरेको छ, त्यो आधुनिक बाटो, पुलपुलेसा निर्माणकै करामत हो भन्ने धेरै छन् । फराकिलो बाटो निर्माण भएपछि मात्र अन्य विकास निर्माण सहज हुने अवधारणा चीनको देखिन्छ । चौडा र फराकिला सडक निर्माणले सुगम र दुर्गम भागलाई जोड्ने र आधुनिक स्रोत साधन सञ्चालन गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने यो महŒवाकाङ्क्षी परियोजनाको उद्देश्य देखिन्छ । रेशमी मार्गले एक अर्को भूगोललाई मात्र जोड्दैन, यसको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध बनाउने ध्येय हो । यो मार्गले स्थल र जल दुवै माध्यमबाट अन्य मुलुकसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
नेपालले पनि चीनको ओबिओआर प्राजेक्टमा संलग्नता जनाइसकेको छ । जसअन्तर्गत अन्तर हिमालय आर्थिक क्षेत्र (ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक जोन अफ कोअपरेशन) भन्ने योजनाको एउटा हिस्सा नेपाल बनिसकेको छ । जसका कारण चीनले तातोपानी–खासा, रसुवा–केरुङ, हुम्लाको हिल्सा–ताक्लाकोट, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का–रिउ लगायतका स्थलमार्ग जोड्ने कामको तयारी शुरु गरेको छ । यसले चीनको व्यापारसँग मात्र नेपाल जोडिने छैन, त्यहाँको संस्कृति, भेषभूषासँग पनि जोडिने छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो राम्रो अवसर पनि हो ।